usasazo ngqo kwindawo yemiboniso, OK idokodo umboniso omangalisayo!
ngomphathi ku 20-09-30
Nge-24 kaSeptemba, uMboniso wama-27 wePhepha leTishu yePhepha lobuChwepheshe livulwe kakuhle! Zizonke iinkampani zeshishini ezingama-868 ezithathe inxaxheba kulo mboniso Indawo yomboniso ifikelela kuma-80,000 eemitha zesikwere! I-OK Booth [7S39] igcwele kwaye iyamangalisa Umbono utsale ...
Iphepha leethishu Isimemo soMboniso weTekhnoloji yeLizwe
Iphepha leethishu lama-27 leMboniso yeTekhnoloji yeHlabathi iya kubanjelwa eNanjing International Expo Centre ukusukela ngomhla wama-24 ukuya kowama-26 kuSeptemba Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba uzimase kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni nani ngesandla. Ukuya kubuchwephesha bephepha lasekhaya. Indlu ka-OK ...
Wuhan, Sala kakuhle! 2020, Kulungile ukudibana nawe eNanjing!
Umboniso weentsuku ezingama-26 we-Tissue Paper International Technology Exhibition ufike esiphelweni eWuhan International Expo Centre namhlanje. Ezi zintathu zoluhlu lweemveliso eziboniswe yinkampani yethu kulo mboniso zitsale ngempumelelo ingqalelo yabathengi abaninzi abasuka phesheya nakwamanye amazwe. Wonke umntu ...
Kulungile iTekhnoloji yoMvelisi weSizwe uyakhanya kwiTissue World Milan, e-Itali
Ukusukela nge-25 kaMatshi ukuya kwi-27, i-2019, iTissue World Milan, umboniso weshishini olwenza iminyaka emibini eMilan, e-Itali, yaphehlelelwa. Iqela lemiboniso yeThekhnoloji ye-OK yafika eMilan kwiintsuku ezimbalwa kwangaphambili kwaye yayikulungele ngokupheleleyo ukubonisa itekhnoloji evuthiweyo kunye netekhnoloji entsha yethishu eyenziwe nge-China.
Ukusukela u-Academician uZhong Nanshan ebhengeze ukosulelwa kwabantu yi-Wuhan's coronavirus entsha kwi-CCTV ngoJanuwari 20, 2020, ubhubhane waseWuhan luchaphazele iintliziyo zabantu abayi-1,4 bhiliyoni baseTshayina. Ngelixa ujonge ubhubhane, wonke umntu sele eqalile ukunikela ingqalelo kwezempilo ...